मुकुन्द घिमिरेले भेटाए यति राम्री प्रेमिका, मंसिरमा बिहे गर्दै ! (हेर्नुस भिडियो) – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठमनोरञ्जनमुकुन्द घिमिरेले भेटाए यति राम्री प्रेमिका, मंसिरमा बिहे गर्दै ! (हेर्नुस भिडियो)
मुकुन्द घिमिरेले भेटाए यति राम्री प्रेमिका, मंसिरमा बिहे गर्दै ! (हेर्नुस भिडियो)
काठमाडौ । मुकुन्द घिमिरेको एउटा भिडियो र तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । उनी अविवाहित हुन् । त्यसैले उनको विवाहको कुरा सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने गरेको छ । हालै एक युवतीसंगको तस्बिर र भिडियोका कारण उनको प्रेमिका भन्दै टिप्पणी भएको छ । मकवानपुर स्थायी घर भएकी सर्मिला काठमाडौंमा बस्छिन् । उनी काठमाडौमा बालआश्रम सञ्चालक हुन् । ‘”थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,
मुकुन्दसंग केही महिना अघि भेट भएको बताउने उनी आफुहरुबीच त्यस्तो केही सम्बन्ध नभएपनि समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले त्यस्तो तस्बिर भाइरल बनाइदिएको बताउँछिन । तर कुराकानीकै क्रममा उनले दुवै जना अविवाहित भएका कारण त्यो कुरा सम्भव पनि हुन सक्ने बताउँछिन् । उनले आफुले दिल निसानी मगर, पुण्य गौतम लगायत भएको स्थानमा मुकुन्दसंग टिकटक बनाएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जसमा उनले गरेका हाउभाउका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको हो ।
सर्मिलालाई युट्युवरले तपाई विवाहित हो की अविवाहित हो भनेर प्रश्न गर्दा उनले आफु अविवाहित भनेर जवाफ दिन्छिन् । यस्ता भिडियो भाइरल भएर परिवारले प्रश्न उठायो भने के गर्नुहुन्छ रु भनेर प्रश्न गर्दा उनले त्यस्तो भयो भने विवाह गर्ने भन्ने जवाफ दिन्छिन् । उनले भनिन् उहाँ पनि अविवाहित म पनि अविवाहित प्रश्न उठाए भने विवाह गर्ने, उनले जवाफ दिन्छिन् । हेर्नुहोस भिडियो”
हेर्नुहोस् भिडियोमा ‘२ जना दिदि पाेईला हिडेपछि मलाई १५ वर्षमै बिहे गरिदिए’/बागलुङकी सुन्दरी युवतीसंग सन्तोषकाे रमाईलाे गफ।
”तपाई फलानोसँग प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो” भन्ने प्रश्नमा अभिनेत्री करिश्माले दिइन यस्तो अनौठो जवाफ
लोकप्रिय अभिनेता अर्जुन श्रेष्ठको आज जन्म, बिहानै देखि शुभकामना को ओइरो
भारतीय नायक गोबिन्दा र नेपाली चेली सुनिताको धुमधाम सङ्ग बिहे …..
‘कोरोना पोजिटिभ भएकी छु ‘TikTok’ बनाएर समय विताउँदै छु’